I-block block - iSearch
Qala yasendlini ikhishi Imishini ummese block
1 Kakhulu kakhulu
2 Kungani i-knifeblock?
3.1 Izinzuzo zamabhuloki abizayo
3.2 Ukungahleki kwamabhuloki abizayo
4 Isibambo sommese
6 Ungayithola kanjani ilungelo lokuvimba ummese?
7 Kungabiza kangakanani?
8 Ngakho kufanele uphathe ama-knifeblocks akho
9 Amathiphu asebenzayo
9.1 Umsikazi kuleso simo?
10.1 Mfushane ukuhlanza nokunakekelwa
11 Lokho esasifuna ukusho!
11.1 Isiphetho emabhokisini
Amabhloki aqinile ayenziwe ngokhuni futhi azinzile kuwo wonke umsebenzi womsebenzi. Ngisho nemigqa evamile yommese ihlonywe kakhulu. Ngokuvamile bathola imivimbo kanye nezikhali. Futhi ukuthola i-whetstone nokubukeka kommese kuvame ukufakwa. Ummese omuhle munye ummese block kufanele kusetshenzwe ngokuhlanzekile. Ngaphezu kwalokho, le ndaba kufanele ibe yizinga eliphezulu futhi lihlale liqinile. Ummese wokunene uhambisana kahle esandleni futhi uhlala ebukhali isikhathi eside.
Yonke ikhishi kufanele ibe nemimese ekhalile ngokwanele. Ngakho ungakwazi ukupheka nokulungisa ukudla kwakho. Kodwa-ke, kuvame ukuthi kunjalo ukuthi imimese igcinwa ngokungalungile. Uma ubeka lokhu ku-drawer, kungenzeka ukuthi ulahlekelwe yimimese ngokushesha. Kumelwe ugweme lokhu ngokugcina ummese wakho othandekayo ekumesekeni. Lezi zingatholakala kumiklamo eminingi ngamanani ahlukene. Ngokushesha umuntu angase agxile ekuthengeni, ngoba isixuku sinkulu kakhulu.
Kodwa-ke, ekusikeni kwe-knifeblock, akubalulekile kuphela ukuhlanza imimese ngokwayo, kodwa futhi ne-block ngokwayo. Manje sesilungisele olunye ulwazi kuwe. Ngakho-ke ungathola ibhokisi lokumeseka elifanele ekhishini lakho.
Izitshani zilokhu zizungezile kusukela abantu bekhumbula. Nakuba imimese yokuqala yayingeke ifaniswe namamodeli yanamuhla, ayejwayelekile. Imikhonto ayisekho ukucatshangwa kunoma yiliphi ikhishi. Abakwa-Laymen banelisekile ngemimese elula. Nokho, i-Hobbyköche kanye nabapheki abaqeqeshiwe bayabaluleka kakhulu ngekhwalithi ephakeme kakhulu nge-knifeblock enhle. Imivimbo ngokuvamile ivela kubaphakeli abawaziwayo futhi ayikhethiwe ngokuzenzakalelayo.
Izinzuzo zamabhuloki abizayo
izinga okusezingeni ekubulaweni
Umsila wokusabalalisa isisindo uphelele
Ukungahleki kwamabhuloki abizayo
kufanele uphathe kahle
Ngaphandle kwama-knifeblades anezinsimbi zensimbi, nanamuhla kunezinye izindlela ezinhle nge-ceramic blade. Lezi zishiswe kakhulu ngaphansi kwengcindezi enkulu nokushisa okukhulu. Ama-ceramic blades asele abukhali futhi alula kakhulu. I-Ceramic iye yabonakala iphikisana ne-allergenic futhi ayinakulinganiswa ne-rust. Kodwa-ke, kunomphumela omkhulu lapha. Uma i-blade iwa, i-blade ingawaphula.
Okudumile nanamuhla nawo amacu ommese okwenziwa nge-damask. Lezi zenzeko zivame ukuqhutshwa ngefomu lamaJapane futhi ngokuvamile zifakwe ngesandla. Okuvamile kulezi zindawo kungukusanhlamvu okukhumbuza isiqu somuthi.
Ngokuvamile kukhona isibambo sommese kusukela ebhokisini lommese elenziwe ngepulasitiki noma izinkuni. Kodwa kukhona nemimese kusuka ensimbi yonke. Lokhu kusho ukuthi lonke ikladi ehlanganisa isibambo senziwe ngokukhipha eyodwa. Ipulasitiki kulula ukugcina ihlanzekile. Izibambo zezinkuni zisezinye izidingo zokulondolozwa. Noma kunjalo, bayathandwa ngabathengi abaningi. Balala kahle ngezandla zabo futhi ngokuvamile bahlala isikhathi eside kakhulu. Kodwa-ke, yonke insimbi iyindawo epholile. Kodwa-ke, isisindo sonke sihlaba umxhwele lapha, okusho ukuthi ummese ungaqondiswa kalula.
Ukhethe isethi yemikhawulo eyisithupha efana ne-Zwilling Professional S Knifeblock? Khona-ke uzothola kulesi setha inani lemikhawulo ye-5 nezikhali. Uzothola isitshalo semifino, ummese wokupheka, ummese omncane onomlenze omude, ummese wokufaka ummese kanye nommese wokubheka izinkwa zokusika.
Ungayithola kanjani ilungelo lokuvimba ummese?
Kuhle uma wazi okuthandayo. Kufanele wazi ukuthi ummese kumele uhlale ulala kahle. Kubalulekile ukuthi imimese esindayo iqukethe izinto eziphezulu zekhwalithi. Ungakwazi ukuphuma ngaso sonke isikhathi. Isibambo se-blade kufanele sibe non-slip futhi, nakanjani, futhi sisesandleni.
I-block emihle yommese akudingeki ilahle imali eningi. Ungalindela ukuthi uzothola ibhokisi eliqinile lommese phakathi kwe-50 ne-100 Euro, okuzosiza kakhulu ekhishini lakho. Into eyodwa iqinisekisiwe. Imodeli yakho entsha izosetshenziswa ngokuqinisekile uma usuqumile.
Ngakho kufanele uphathe ama-knifeblocks akho
Oshayayo umlenze, okuyiyona engozini kakhulu. Ungalokothi ubeke ama-blades ku-drawer. Kuyasiza futhi ukugcina imimese isilungele ukusetshenziswa njalo. Into enhle mayelana nesitoreji esivulekile ukuthi uziqhenyayo ngokuziqhenya nge-knifeblock yakho entsha.
Ukufaka okuzungezile kuphephile futhi kuvikela ama-blades ekuthumeni. Ukufakwa okuqondile kuyasebenza ngoba ama-blades angashintshwa futhi i-blade ayikho emhlabathini. Kusebenza futhi lapho ukufakwa kuvulekile phansi. Khona-ke noma yimiphi imvuthuluka ingawa. Kodwa-ke, akunakwenzeka ukuthi ulayishe amakhi emgwaqweni ongalungile. Ngakho-ke ungaqala umsebenzi wakho womsebenzi ngoba ummese ubheka phansi.
Ngaphezu kwamabhlokhi ama-brilliant, ane-crystal inserts. Kulesi simo, ungagcina yonke imimese bese wandisa imimese yakho njengoba ufisa. Lapha, ngeshwa, kunesidingo ukuthi lezi zibhamu azilula ukuhlanza futhi. Ukuhlanza kufanele ube nokudala futhi ube nesineke esithile sokubekezela. Yingakho kufanele ucabange ukuthi uthanda yini leli bhuloho enkuni evamile.
Kodwa mhlawumbe akusikho konke kuwe futhi ukhetha umucu wamagnetic? Khona-ke kufanele wazi ukuthi ungagcina futhi isikhala emsebenzini wokusebenzela. Imivese ye-Ceramic, noma kunjalo, ayinamathele kulezi ziqeshana.
Uma ufuna ukuletha ummese wakho nawe futhi ufuna ukuba nayo yonke indawo, khona-ke ipokhethi yommese kufanelekile kuwe. Lokhu kukuvumela ukuba ugcine imimese embalwa ehlukana komunye nomunye. Khumbula, noma kunjalo, ukuthi kunzima ukuvula isikhwama kuphi. Ngokuvamile isikhala asanele ngoba isikhwama sidinga imfuneko enkulu yesikhala. Kubantu abaningi kubuye kube namahloni ngakho-ke kunalokho kungcono ummese ojwayelekile kusukela emgqonyeni wokubanjwa. Kodwa-ke, isikhwama siyindlela ehlukile yokuvimba umkhiqizo ojwayelekile.
I-Wüsthof Kochkoffer Magnetboden leer 7383-43cm TOP PRICEVuka
Isikhwama se-Bag (esingenalutho)
Umsikazi kuleso simo?
Okungaphezu kokusebenzayo kuyisimo sommese kusuka kuWüsthof, icala lokupheka eliyisisekelo semagnetic. Lokhu kungase kuhambisane nawe emgwaqweni. Ingabe uhlela iholidi endlini yeholide? Bese uthatha ummese wakho kule sutukisi. Kulesi simo, imimese yakho igcinwa ngokuphepha futhi ungayisebenzisa ngokuqondile ngemva kokufika kwakho. Icala liqinile futhi liqinile futhi lizokuhamba nani isikhathi eside.
Manje sekuphathelene nokuthola ukufaneka okufanelekile. Akufanele usebenzise ukwesekwa kwengilazi, insimbi noma itshe. Ukwesekwa kumele kube okungezona-slip futhi kufanele ukuphumula ngokuqinile emkhathini. Kuhle uma izinyawo zenjoloba noma i-slip resistant-resistant zikhona. Izinkuni ziye zafakazelwa ukuthi ziyindlela engcono kakhulu. Igcina ummese ubukhali isikhathi eside. Ngaphezu kwalokho, i-antibacterial. Khona-ke kukhona impahla epulasitiki.
Mfushane ukuhlanza nokunakekelwa
Ummese wokupheka ovela emgodini wommese kufanele uhlanzwe njalo emva kokusetshenziswa. Kungasuswa ngendwangu emanzi. Hamba kusuka phezulu phezulu kwekhasi ubuyele emuva. Bese uthatha isidlo bese usula ummese owomile. Izitshani ezilahlekelwa ubukhali ngokushesha kungenzeka zihlukumezwe. Ukudla okune-Acid noma ama-detergents anokuqeda amandla noma okulimazayo kungalimaza umhlanga. Ungasebenzisi ama-rinsing agents, amanzi ashisayo kanye nosawoti ngesikhathi sokuhlanza.
Kumelwe futhi usule izinsimbi ezenziwe ngamapulangwe ngendwangu ebomvu. Akufanele ukhohlwe ummese onjalo emanzini. Lokhu kubulala izinkuni.
I-block block ngokwayo kufanele ihlanzwe ngezikhathi ezithile nge-detergent kanye namanzi omuhle. Ungasebenzisi amakhemikhali abukhali. Futhi ukukhipha izipanji akuzona ukuhlanza ibhokisi lakho. I-block kufanele iphele emoyeni ngemva kokuhlanza. Khulula ama-bins ngezikhathi ezithile zemvuthu.
I-Zwilling 35621-004-0 Professional S Knife block, bamboo, 7-partsDisplay
Ama-Ice Hard Hard Blade: I-Friodur blade lukhuni iqhwa lokuqina okuqinile nokumelana nokugqwala
Insimbi Engagqwali: Amawele akhethekile ancibilikayo akhiqizwa kuphela i-Zwill. Insimbi yenziwe kahle ukuze ibe nokuqina okuqinile nokuqina kokugqwala
Imimese ibonakala ngokuqanjwa kwawo okungaphelelwa isikhathi kwama-rivet amathathu. Ngokudluliselwa komthungo phakathi kwesibambo kanye necala
Isigaxa sommese senziwe ngoqalo olusezingeni eliphakeme futhi sinikeza zombili inketho yokubeka ephephile nenesitayela
Ngeshwa, le nqubo ayiphutha kubantu abaningi. Kuhlale kunconywa ukuthi kube nemimese eqoshiwe ngumchwepheshe. Ngakho ungakujabulela isikhathi eside. Ngokuqinisekile lokhu kuthinta amakhiwe akhiwe ngezimbali.
Endabeni yemimese emihle, kwanele ukuba ibukhali njalo eminyakeni emibili.
Lokho esasifuna ukusho!
Ungakhohlwa ukuthi imimese ihlale ibukhali ku-knifeblock. Njalo ugcine ibhokisi lommese kude nezingane futhi uqiniseke ukuthi ulisebenzisa kahle. Ngale ndlela ungagwema ukulimala.
Amakhemikhali amabhlokhi ayasebenza futhi asebenza kuzo zonke ikhishi elihle. Uzokwazi ukuwacubungula nokuwacubungula okuningi. Qinisekisa ukuthola ibhokisi lommese elihlangabezana nezidingo zakho. Kuhle kakhulu ama-block blocks amabili. Ungakhetha amabhlokhi emimese engxenyeni yenani eliphakathi futhi ngeke ulizisole. Into ebalulekile ukuthi uthola konke okudingayo futhi usebenzise isethi ngokufanele kwibhokisi lakho lommese omusha. Ibhokisi lommese lisebenza futhi lingasuswa kalula futhi ngokushesha. Siphinde sikubonise izindlela ongathanda ukuzicabangela.
Umkhiqizo we-Deik Profi we-knifeblock, i-16-tlg, umsizi ongenasinhla Ummese we-Chef usethe nge-block block, isibonakaliso esimnyama
I-Sharp blade yensimbi engenasici yaseJalimane kanye ne-blade block eyenziwe nge-oki. Ngenxa yalokho, le miimese inomsebenzi wesikhathi eside nendawo yokumelana nokubola kwesibindi
16-ucezu ummese: izinkuni block, 8 "chef ummese, 8" inyama ummese, 8 "Insimbi elola steel, 8" sikelo, 5 "ngento ummese, 5" Santoku ummese, 5 "utamatisi ummese, 4,5" Steak ummese * 6 izingcezu 3,5 "yokubhanqa ummese , 3 "yokubhanqa ummese
Ngokungafani nemimese yendabuko evela komunye owodwa owakhiwe kuwo wonke. Isisindo esincane sokusebenza ngaphandle kokukhathala. Imimese iyalinganisa ngokuvumelana nemigomo yemishini.
Ubuchwepheshe be-antibacterial: ukungcola akukwazi ukuxazulula, amabhaktheriya akanayo amathuba. I-design ehlanzekile ngokusho kolwazi lwamanje lwesayensi.
IQARANTI LOKUQALA: Umkhiqizo omusha we-100% onesiqinisekiso sangemuva se-30 semali emuva futhi iminyaka engu-2 iwaranti
I-Mack Universal block block ekwenziweni ngokhuni olucwebewe ngopende omnyama, kufakwe ipulasitiki ekhiphekayo (emnyama)
I-Universal block block ekwakhiweni okulula kwezinkuni neKunsstofeinsatz. Umbambisi wamehlo kuwo wonke amakhishi!
Ukusebenza kwekhwalithi ephezulu: izinkuni ezinhle, ezimnyama ezihlanganisiwe
Kufaneleka kuzo zonke izinhlobo zemimese: insimbi engenasici noma i-ceramic, amakhiwe awadonswa ukusetshenziswa
Ifanela kuze kube yimimese i-6- 7 ubude be-24cm ekubanjeni ngommese, nakulezo zitsha zakho zasekhishini
Ukufakwa kwe-Bristle okwenziwe ngeplastiki emnyama: ukuhlanzeka, ukunganambitheki, ukukhipha, okulula ukuwahlanza. Ikhwalithi ephezulu yokucubungula kanye ne-opics enhle kakhulu yenza lokhu kuvimbeka okuhle kugqamise ekhishini lakho
I-AmazonBasics Premium Knife Block, inkomba ye-9 yethimba
9-ucezu yona 8 ubukhulu: ummese chef sika (20,3 cm), Santoku (20,3 cm), Carver (17,8 cm), isinkwa ummese (20,3 cm), boning ummese (15,2 cm) Umfelandawonye Knife (12,7 cm), yokubhanqa ummese (8,9 cm) ummese sharpener (20,3 cm) nommese block 1
Izinsimbi zensimbi ezingenasinakha eziqinisekisiwe ziqinisekisa ubukhali obuhlala njalo
Ukwakhiwa kwe-3 rivet ekwakheni okusanhlamvu okugcwele kuqinisekisa ukulinganisela nokulawula
Izimpendulo ze-ergonomic zikhululekile futhi zilondekile esandleni
Ukugeza ngesandla kuphela.
Isethi yensimbi yase-Homgeek block, umese ocijekile osethelwe ngesibambo se-ergonomic senziwe ngokhuni lwePAKKA, insimbi engagqwali eyindilinga eyingqayizivele yaseJalimane i-1.4116 chef esethiwe nge-block yokhuni, isibonisi esiyingxenye engu-8
UKUQALA UKUPHILA KOMKHOSI: Ummese umise ummese womkhandi, ummese wenyama, ummese wesinkwa, ukukhanda ummese, ukukhishwa kwekhishi, ukukhanga ummese, ukubamba ummese kanye ne-block block
Ungalokothi nokugqwala: Kusukela ummese steel German 1.4116 ukhona, lo 15% chromium (-Chromium liyisici trace, inquma nobulukhuni ikhaba), it has ukugqwala kakhulu futhi namachibi ukumelana
Superior SHARP: Kungakhathaliseki ummese ukhaliphile, ngokuya impahla kanye nasekuqiniseni ummese yethu blade senziwa imiphetho ngesandla iphucuziwe at 14-16 degrees ohlangothini ngalunye, ibala ukumelana futhi enembile uqalise. Ngakho-ke, ummese yethu ocijile okwedlula
AKUKHONA UKUHLELA: Kungakhathaliseki ukuthi i-blade igxilile, kuncike ebubini bezinto ezibonakalayo. Ummese wethu wenziwe nge-German non-stainless steel 1.4116, obunzima bakhe bungaphezulu kwe-HRC57, ngakho ummese wethu akulula ukusila
UKUQALA OKUPHAKATHI: I-ergonomic isibambo esenziwe ngePAKKA izinkuni ikhululekile, iqinile futhi ihlala njalo. Ngeke uzizwe ukhathele ngisho noma ubamba ummese isikhathi eside
I-Mack Universal block block kumklamo olula we-22 cm, Ø I-11 cm emnyama ngokufakwa kwepDisplay okususwayo
I-Universal block block 22 cm ukuphakama, Ø 11 cm kumklamo olula kanye ne-Kunsstofeinsatz ekhipha
Ngesisindo esikhulu futhi esizinzile se-1100g, ibhulokhi ihlala endaweni ephephile. Hlela imimese yakho ngokulandelana bese uyigcina iphephile futhi ungayifinyelela. Asisafuneki ngommese ofanele ekhondweni
Ihambelana nemimese ye-7 ngobude be-24cm emakhiweni wommese, futhi nezitsha zakho zekhishi
I-Tescoma ummese block, ongenalutho, owenziwe ngokhuni, wezimese eziyi-13 nezithungu zezinkukhu / ukubukisa kwensimbi
Isigaxa sommese ngaphandle kommese sakhiwe ngokhuni oluyigugu olukhethiwe esihlahleni senjoloba saseBrazil.
esicacile, esisebenzayo kanye nokugcina isitoreji sekhishini emimese
Ukuvikelwa okuphelele kwamacembe wemigese ebiza kakhulu
Izihlalo ze-14 = umkhono we-13 no-1 ukusika ngensimbi noma izikhali ze-1
Umkhiqizi womkhiqizo weTescoma
I-Navaris knight holder ene-magnetic kno board kusuka ku-acacia - umazibuthe wensimbi ovimba ukhuni ophethe uzibuthe - isibonisi sommese wamandla kazibuthe
UKUTHOLAKALA KOKUFUNDA: Ngamafenisha ekhishini asesitayeleni enziwe ngokhuni lomtholo ngoNavaris, hhayi nje uku-oda ekhishini, kepha isitayela. Ngenxa yemichilo ehlanganisiwe kagesi emabhulokini, imimese yompheki noma isikali kugcinwa kubonakala kuso eduze kwesibambo.
IZIMBI NJENGESIBILI: Unyawo lwe-minimalist olwenziwe ngensimbi engenasici luqinisekisa ukuthi ibhlokhi lommese wokhuni lubekwe ngokuqinile. Hlanza isibambo ngendwangu eyomile noma ethambile. Hhayi ukugeza izitsha kuphephile!
ISIDLALO ESENGEZIWE: Njengoba sinobukhulu be-27,7 x 27,5 cm, ibhulokhi elisebenza ngozibuthe linikeza isikhala esiningi se-cutlery, imimese eyinqe kanye nemimese yekhekhe. Ukujula kokuma kungama-12 cm. Ibhlokhi yommese ilungele kuphela imikhiqizo yemaginethi.
QAPHELA: Njengoba umnikazi wamandla kazibuthe engumkhiqizo wemvelo, inhlamvu ngayinye ihlukile ngenxa yokusanhlamvu kwezinkuni. Ubuntu obuthe xaxa kudeskithophu yakho!
I-KNIFE STAND PLUS: Ngenye indlela, ungasebenzisa futhi isivimbo sommese sokhuni njengesibambiso sikhiye obukekayo.
I-Klarstein Kitano - I-Knife Set, i-Knife block, i-8-izingxenye, ama-Precision Blades, Insimbi Engagqwali, I-Wood block, Isikhombi esimnyama
I-BREEZE FAR EAST: I-Kitano Knife eyayiyingxenye eyisishiyagalombili i-Klarstein ihambisa ifilosofi yaseMpumalanga Ekude ekhishini lasekhaya. Ukuzijabulisa okukhulu kakhulu kwezithako ezintsha kudinga ukulungiselela kangcono ngekhwalithi eliphezulu.
Lobehlukene: ezahlukene blade Umumo eziyisikhombisa lukhuni izindwani steel ukunikeza elilungile ithuluzi ukusebenzela ukugawulwa, filleting, enesisindo angawethusi. Ngaleyo ndlela ukukholisa izindwani ngokunemba nokukhanya kwabo isisindo izibambo ergonomic.
UKUQALA KWEZIMALI: Umumo omncane wesibhakabhaka se-matt black Klarstein uthatha isikhala esincane futhi ugcizelele ngokuklama kwawo okuncane. I-Plexiglas igubungela emagqumeni aphezulu futhi aqondiswayo ukuvikela ama-blades.
UKUSEBENZA KANYE NE-HYGIENIC: Ngemuva kokusetshenziswa, amanzi neendwangu zihlanza, imimese emabhuloki ommese kulindele ukusetshenziswa okulandelayo. Izitshalo ezisezingeni eliphansi emgodini wommese zivumela umswakama ukubaleka futhi kuvimbele ukwakheka kwamagciwane.
I-QUALITY: i-2008 yaqala ukushintsha umhlaba wezimpahla zasendlini. Phakathi naleso sikhathi, ukuhlanganiswa kwempahla ephezulu, ukuklama kwansuku zonke kanye nohlelo lokusebenza lomphakathi oluthintekayo kukhuthaza abapheki abaningi bokuzilibazisa.
I-Zwilling 36133-000-0 Gourmet Self-sharpening block block, 7-ingxenye, inkomba emnyama
Okuqukethwe: I-Spit and Garniermesser (10 cm), ummese wendawo yonke (i-13 cm), ummese wenyama (i-16 cm), ummese we-chef (20 cm), ummese wesinkwa (20 cm), isikhafu sezinhloso eziningi (i-20, i-5 cm).
Ama-lukhuni aqine kakhulu e-Ice: ubunzima bezinto ezibonakalayo ezilungile kubalulekile. Kungakho imimese yochungechunge lweGourmet lukhuniwa iqhwa kusetshenziswa inqubo yeFriodur
Ikhwalithi ephezulu iqala ngezinto zokuqalisa. Yingakho kusetshenziselwa iminski ekhethekile yeGemini ukuthola imimese yochungechunge lweGourmet. Le nsimbi ihlangabezana nezindinganiso eziphakeme kakhulu
I-block-knatch ekwazi ukuzilolonga: Ngaphakathi Slots kukhona abaqinisi bezimese abenziwe ngobumba, obumba imimese lapho ususa
Kwenziwe eJalimane: Uchungechunge lommese lwenziwe eGlendmet ekomkhulu leZwill eSolingen
I-ZWILLING self-sharpening block block, izingcezu ezi-7, onsundu omnyama (umlotha), umbukiso wezinkanyezi ezine
Okuqukethwe: I-Spit and Garniermesser (10 cm), ummese wendawo yonke (i-13 cm), ummese wenyama (i-20 cm), ummese we-chef (20 cm), ummese wesinkwa (20 cm), isikhafu sezinhloso eziningi (i-20, i-5 cm).
Ama-solid-hard blade: Ubulukhuni bezinto ezifanele bulungile. Kungakho imimese yochungechunge lwezinkanyezi ezine lukhuni iqhwa kusetshenziswa inqubo yeFriodur
Ikhwalithi ephezulu iqala ngezinto ezingavuthiwe. Kungakho amawele akhethekile ancibilika asetshenziselwa imimese yochungechunge lwezinkanyezi ezine. Le nsimbi ihlangabezana nezidingo eziphezulu kakhulu
Kwenziwe eJalimane: Uchungechunge lommese olunezinkanyezi ezine lwenziwa kusitshalo esikhulu seZwilling eSolingen
Isihloko esilandelayoAmabhuloho wama-Rotary Electric Rotary